मतदान गर्दै एकसय चार वर्षीय वृद्ध » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मतदान गर्दै एकसय चार वर्षीय वृद्ध
बुधबार, असार १४, २०७४ १२:४५ मा प्रकाशित !
दमक, असार १४ गते । झापाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित मतदान केन्द्रमा १०४ वर्षीय वृद्धले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्नुभएको छ । कमल गाउँपालिका–५ स्थित मङ्गलमय माविको मतदान केन्द्रबाट स्थानीयवासी १०४ वर्षीय वद्ध रणबहादुर कार्कीले मतदान गर्नुभएको हो । उहाँ कमल गाउँपालिकाकै सबैभन्दा ज्येष्ठ मतदाता हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी, सोही वडाकी ५२ वर्षीया पूर्ण अशक्त दुर्गा गुरागार्इंले पनि ह्विलचियरबाट नै मतदान गर्नुभएको छ । उहाँले सोही मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको थियो । कमल गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठूलो मतदान केन्द्र मानिने त्यस वडामा पाँच हजार २८ मतदाता छन् । जारी मतदानमा अहिले बिहान १० बजेसम्म त्यस मतदान केन्द्रबाट एक हजार मतदाताले मत खसालेको त्यहाँका मतदान अधिकृतले जनाएका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: मतदानमा लाइन लागेकै अवस्थामा वृद्धको निधन
NEXT POST Next post: दश हजारभन्दा बढी मतदाता परिचयपत्रविहीन छन्
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, असार १४, २०७४ १२:४५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, असार १४, २०७४ १२:४५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, असार १४, २०७४ १२:४५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, असार १४, २०७४ १२:४५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, असार १४, २०७४ १२:४५